Iindaba -Zeziphi iindawo ezifanelekileyo zokuchaneka ngokuchanekileyo
Siyazi ukuba machining ngqo uneemfuno eziphakamileyo ngqo, ngqo machining has ngqongqo elungileyo, ngqo eliphezulu imveliso, kunye nokusetwa isixhobo oluchanekileyo, ngoko ke ungaqhubekeka iinxalenye kunye neemfuno ngqo eliphezulu. Ke zithini iindawo ezifanelekileyo zokuchaneka ngokuchanekileyo? Oku kulandelayo kwaziswa nguXiaobian:
Okokuqala, xa kuthelekiswa ne-lathes eziqhelekileyo, i-CNC lathes inomsebenzi osika ngokukhawuleza wesantya, ngaphandle kobuso bokugqibela okanye ububanzi obungaphandle beedayimitha ezahlukeneyo zinokuqhubekiswa ngesantya esifanayo, oko kukuthi kuqinisekiswe ixabiso lendawo efanayo kwaye incinci noko. I-lathe eqhelekileyo inejubane eliqhubekayo, kwaye isantya sokusika siyahluka ngobubanzi. Xa imathiriyeli yokusebenza kunye nesixhobo, isibonelelo sokugqiba kunye ne-engile yesixhobo zihleli, uburhabaxa bomhlaba buxhomekeke kwisantya sokusika kunye nesantya sokondla.
Xa kusetyenzwa umphezulu ngoburhabaxa bomhlaba obahlukeneyo, isantya sokutya esincinci sisetyenziselwa umphezulu onoburhabaxa obuncinci, kwaye inqanaba lokutya okuphezulu lisetyenziselwa umphezulu onoburhabaxa obukhulu, obunokwahluka okuhle, ekunzima ukufezekisa kwimigca yesiqhelo . Iindawo Complex contoured. Nawuphi na umjikelo wendiza unokuqikelelwa ngomgca othe ngqo okanye iarc ejikelezayo. Ukuchaneka kwe-CNC ngokuchanekileyo kunomsebenzi wokudityaniswa kwesetyhula, okunokuqhubekeka ngamalungu ahlukeneyo entsonkothileyo. Ukusetyenziswa kwe-cnc machining ngqo kufuna ukusetyenziswa ngononophelo komqhubi.
Ukuchaneka kwe-CNC ikakhulu kubandakanya ukujika okuhle, ukudika okucocekileyo, ukugaya okucolekileyo, ukugaya kunye neenkqubo zokugaya:
(1) Ukujika okuthe tye kwaye kuyadika: Uninzi lwealloy echanekileyo yokukhanya (ialuminium okanye ingxubevange yemagniziyam) iinxalenye zeenqwelomoya zenziwa ngale ndlela. Izixhobo zekristale zedayimani enye zisetyenziswa ngokubanzi, kwaye irediyasi yomda webala ingaphantsi kwe-0.1 micron. Machining kwi lathe eliphezulu-ngqo unako ukufikelela 1 micron ukuchaneka nokungalingani umphezulu kunye avareji ukuphakama umahluko ngaphantsi kwe-0.2 micron, nokulungelelanisa ukuchaneka ukufikelela ± 2 micron.
(2) yokugaya Fine: esetyenziselwa machining aluminium okanye beryllium ingxubevange iinxalenye zesakhiwo kunye neemilo ezintsonkothileyo. Thembela kukuchaneka kwesikhokelo kunye nothango lwesixhobo somatshini ukufumana indawo yokuchaneka okuphezulu. Isantya esiphezulu sokugaya kunye neengcebiso zedayimani zomhlaba ngononophelo kwiindawo ezichanekileyo zesipili.
(3) ukugaya Fine: esetyenziselwa machining shaft okanye imingxunya iindawo. Uninzi lwala malungu lwenziwe ngentsimbi eqinileyo kwaye lukhuni obuphezulu. Uninzi lwee-spindle zokugaya eziphezulu kakhulu zisebenzisa i-hydrostatic okanye i-dynamic pressure bearings iibheringi zokuqinisekisa uzinzo oluphezulu. Ukongeza kwimpembelelo yokuqina kwesixhobo somatshini kunye nebhedi, ukuchaneka kokugqibela kokugaya kukwanxulumene nokukhetha kunye nokulinganisela kwevili lokusila kunye nokuchaneka kokuchaneka komngxunya weziko lomsebenzi. Ukugaya kakuhle kunokufezekisa ukuchaneka kwe-1 micron kunye nokuphuma kwe-0.5 micron.
(4) Ukusila: Ukukhetha nokulungisa iindawo ezingaqhelekanga eziphakanyisiweyo kumphezulu ukuze ziqhubekeke kusetyenziswa umgaqo wophando macala lwamalungu afanayo. Ubunzima be-particle diameter, ukusika amandla kunye nokusika ubushushu kunokulawulwa ngokuchanekileyo, ke yeyona ndlela ichanekileyo ichanekileyo kubuchwephesha bokuchaneka ngobuchwephesha. Amalungu e-hydraulic okanye e-pneumatic mating parts ze-servo ezichanekileyo zeenqwelomoya kunye nezinto ezithwala uxinzelelo lwe-gyro motor eziqhubayo zenziwa ngale ndlela ukufezekisa ukuchaneka kwe-0.1 okanye i-0.01 micron kunye nokungalingani okuncinci kwe-0.005 micron.